မိုက်လေးကိုင်ပြီး ရယ်စရာဘဲပြောချင်ဗေမဲ့ သေ နတ်ကိုင်ရတဲ့ တိုင်းကျော် ဟားငါးကောင်တို့ ပြောပြလာတဲ့စကားများ…. – စွယ်စုံသုတ
မိုက်လေးကိုင်ပြီး ရယ်စရာဘဲပြောချင်ဗေမဲ့ သေ နတ်ကိုင်ရတဲ့ တိုင်းကျော် ဟားငါးကောင်တို့ ပြောပြလာတဲ့စကားများ….
တချိန်က ဟာသတွေပြောတဲ့ လူရွှင်တော်တွေဆိုပေမယ့် အခုချိန်မှာ တဖွဲ့လုံးအနေနဲ့ ရယ်စရာပျက်လုံးတွေပြောမထွက်နိုင်တော့တဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ တိုင်းကျော်..လူရွှင်တော်တိုင်းကျော်တို့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ကတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း သွားတက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်
။ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး တောထဲကိုထွက်လာခဲ့တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ကို ပြည်သူတွေကလည်း လေးစားချီးကျူးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ကတော့ အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားတွေအဖြစ် ရပ်တည်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
တောထဲတောင်ထဲမှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ နေထိုင်နေရပေမယ့်လည်း သူတို့အဖွဲ့က လုံးဝစိတ်ဓာတ်မကျဘဲ အမြဲတမ်း တက်ကြွနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူတို့က ပြည်သူတွေ အားတက်စေဖို့အတွက်ပါ အမြဲတမ်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုလည်း တိုင်းကျော်က အရင်ကဆိုရင် စင်ပေါ်မှာ လူရွှင်တော်ဝတ်စုံနဲ့ ဟာသပြောရတဲ့ဘဝကို ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ ပြည်သူတွေထဲက တစ်ချို့မိသားစုတွေ ငိုနေရတာမြင်ပြီး သူတို့ရယ်စရာတွေ မပြောနိုင်တော့ကြောင်း ဖွင့်ဟလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် တိုင်းကျော်က သူတို့အဖွဲ့ကို ဂရုစိုက်ပါ၊အားတင်းထားပါလို့ မပြောဘဲ
ပြည်သူတွေသာ ဂရုစိုက်ပြီးနေကြဖို့ ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ချိန်တုန်းက ပျော်တော်ဆက်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အသည်းမာစပြုနေတဲ့ ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တခွိနကြ ဟာသတှပှေောတဲ့ လူရှှငတြောတြှဆေိုပမယေ့ြ အခုခွိနမြှာ တဖှဲ့လုံးအနနေဲ့ ရယစြရာပကွလြုံးတှပှေောမထှကနြိုငတြော့တဲ့ နောကကြှယကြ အကှောငြးရငြးကို ပှောပှလာတဲ့ တိုငြးကွောြ..လူရှှငတြောတြိုငြးကွောတြို့ ဟားငါးကောငအြဖှဲ့ကတော့ လှတမြှောကနြယမြှမှော စဈရေးလေ့ကငွ့ရြေးသငတြနြး သှားတကနြကှတော ဖှဈပါတယြ
။ ပှညသြူတှကေို ကာကှယဖြို့အတှကြ အရာအားလုံးကို စှန့လြှှတပြှီး တောထဲကိုထှကလြာခဲ့တဲ့ သူတို့အဖှဲ့ကို ပှညသြူတှကလေညြး လေးစားခွီးကွူးနကှတော ဖှဈပါတယြ ။ သူတို့ကတော့ အမှနတြရားရဲ့ဘကတြောသြားတှအဖှေဈ ရပတြညပြှီး ပှညသြူတှနေဲ့အတူ ရှိနတော ဖှဈပါတယြ ။
တောထဲတောငထြဲမှာ ပငပြနြးဆငြးရဲစှာ နထေိုငနြရပေမယေ့လြညြး သူတို့အဖှဲ့က လုံးဝစိတဓြာတမြကဘွဲ အမှဲတမြး တကကြှှနကှတော ဖှဈပါတယြ ။ ဒါ့အပှငြ သူတို့က ပှညသြူတှေ အားတကစြဖေို့အတှကပြါ အမှဲတမြး တိုကတြှနြးနှိုးဆောပြေးနကှတောလညြး ဖှဈပါတယြ ။
အခုလညြး တိုငြးကွောကြ အရငကြဆိုရငြ စငပြေါမြှာ လူရှှငတြောဝြတစြုံနဲ့ ဟာသပှောရတဲ့ဘဝကို ဘာနဲ့မှမလဲနိုငခြဲ့တဲ့အကှောငြး ပှောပှထားတာ ဖှဈပါတယြ ။
ဒါပမေဲ့ အခုခွိနမြှာတော့ ပှညသြူတှထေဲက တဈခွို့မိသားစုတှေ ငိုနရတောမှငပြှီး သူတို့ရယစြရာတှေ မပှောနိုငတြော့ကှောငြး ဖှင့ဟြလာခဲ့တာ ဖှဈပါတယြ ။ ဒါ့အပှငြ တိုငြးကွောကြ သူတို့အဖှဲ့ကို ဂရုစိုကပြါ၊အားတငြးထားပါလို့ မပှောဘဲ
ပှညသြူတှသော ဂရုစိုကပြှီးနကှဖေို့ ပှောထားတာ ဖှဈပါတယြ ။ တဈခွိနတြုနြးက ပွောတြောဆြကတြှဖှဈေခဲ့ပမယေ့ြ အခုတော့ အသညြးမာစပှုနတေဲ့ ပှညသြူ့ရဲဘောတြှဖှဈေနပှေီဆိုတဲ့ ဟားငါးကောငအြဖှဲ့ရဲ့ပုံရိပတြှကေိုလညြး ဖောပြှပေးလိုကပြါတယြ။
လူတိုင်း ခက်ခဲ ကြပ်တည်းနေတဲ့ကာလမျိုးမှာတောင် ကားပေါ်မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သိန်းတစ်ရာကို ရိုးရိုးသားသား ပိုင်ရှင်လက် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သူ
သွားကိုက်ဝေဒနာအတွက်် တကယ်ထိရောက်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်း